UKhune uthi bengayiqumba phansi kungabi ndaba zalutho iSundowns - Impempe
UKhune uthi bengayiqumba phansi kungabi ndaba zalutho iSundowns
April 23, 2021 Impempe.com
Unozinti wokuqina weKaizer Chiefs, u-Itumeleng Khune ukhathazekile ngokugqoza kwamaphuzu azobafaka kwiTop 8 kodwa akayesabi iMamelodi Sundowns okuze kube imanje ayiyazi induku kwiDStv Premiership.
Lo nozinti usabalisa ngokulahleka komgqigqo wabo wemidlalo eyisishiyagalombili bengahlulwa njengoba bephoxwe yiCape Town City kodlule.
UKhune uthi akukhathalekile ukuthi iSundowns abadlala nayo ngeSonto ngo 3 ntambama, eLoftus Stadium ikuyiphi ifomu kodwa abadlali beChiefs bayazazi ukuthi banawo amava okubuya namaphuzu amathathu kompetha beligi.
“Akekho ongazi kithi ukuthi kufanele alindeleni kwiSundowns engayazi induku kule sizini. Badlala kahle futhi imiphumela yabo iyazikhulumela. Akusho kodwa lokho ukuthi kufanele singathembeli kwesikuhlelile kumbe sizehlise ngoba sidlala kahle nathi yingakho sidlale kwaze kwacela eshumini singashaywa,” usho kanje.
UKhune uyakholelwa ekutheni bangayishaya iSundowns kodwa konke lokhu kulele ekutheni abadlali bayakholwa yini.
“Kusemqoka ukuhlala siqaphile ngaso sonke isikhathi kulo mdlalo. Silungisa konke okufanele sikulungise ejimini ukuze sifike kuwo siyizingovolo.
“Siyazi ukuthi singayimela iSundowns. Kusemqoka lokhu ngoba indawo esikuyo iyaphoxa kubalandeli beChiefs.
“ISundowns iqhwakele kodwa sonke singabadlali siyazi ukuthi sinawo amava okuyishaya njengoba umlando ukusho lokhu. Sinalo ithemba lokuthi sizongena kwiTop 8.”
Lo nozinti weBafana Bafana ufongqe isigqoko kubalandeli wazicelala ukuba babuyise ithemba ngabo ngoba bazama konke okusemandleni ukubesula izinyembezi.
“Sicela kubalandeli ukuthi basethembe ngoba siya kulo mdlalo sicabanga bona kanjalo nejezi leqembu.
“Okuzosisiza ukuthi sibaxine zisuka abeSundowns singaze sibavumele ukuthi badlale ngendlela ebayijwayele.
“Amaphuzu amathathu yiwona kuphela esiwayela eLoftus hhayi okunye. Siyiqembu elikhulu ngakho kumele nakanjani sibekhona kwiTop 8. Siyaqala ngeSundowns ngeSonto emuva kwalokho konke okunye kuzozihlela.
“Siwulungele lo mdlalo ngoba siyazi kumqoka kanjani ukwenza abalandeli beChiefs baziqhenye ngabadlali babo.
“Siya empini futhi sizimisele ukulwela abalandeli nesithunzi seqembu,” kusho lo nozinti.
Previous Previous post: ISwallows inephupho lokudlala imidlalo yase-Afrika
Next Next post: Iqinise nakubaphathi iSekhukhune efuna ukuphuma ‘ehlathini